सुदर्शन देवकोटा स्मृति दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार पवित्रा सुनारलाई • Health News Nepal
काठमाडौं, ८ असार २०७९
सुदर्शन देवकोटा स्मृति दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार २०७९ बाट नागरिक दैनिककी स्वास्थ्य पत्रकार पवित्रा सुनारले पाउनु भएको छ।
विगत दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय सुनारलाई ३० हजार रुपैयाँ राशी सहित पुरस्कृत हुनुभएको हो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र सुदर्शन शारदा देवकोटा स्मृति फाउण्डेसनको संयुक्त प्रयासमा गत वर्षदेखि उक्त पुरस्कारको सुरुवात भएको थियो । गत वर्ष एपीवान टेलिभिजनकी पत्रकार सपना पौडेलले उक्त पुरस्कार पाउनुभएको थियो ।
बुधबार काठमाडौँ आयोजित विशेष समारोहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र फाउण्डेसनी अध्यक्ष डा. सुधा देवकोटाले नागरिक दैनिककी पत्रकार सुनारलाई उक्त पुरस्कार वितरण गर्नुभयो । सो अवसरमा बोल्दै राज्यमन्त्री खापुङले पत्रकारहरुले जोखिम मोलेर विभिन्न समयमा काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि अग्रसर भएर कलम चलाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य पत्रकारिता जोखिम पत्रकारिता रहेको बताउनुभयो । कोभिडमा स्वास्थ्य पत्रकारहरुले उत्कृष्ट कार्य गरेको उहाँको भनाई छ ।
फाउण्डेसनकी अध्यक्ष डा. सुधा देवकोटाले स्वास्थ्य पत्रकारहरु खोजी पत्रकारितामा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो स्वर्गीय पिता सुदर्शन देवकोटाको सम्झनामा वर्षेनी उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने जानकारी दिदै पिताबाट प्रेरित भएका कारण पत्रकारिता क्षेत्रको महत्व बुझेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारिताको सम्मान स्वरुप उक्त पुरस्कार स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा फाउन्डेशनका तेजकुमार बास्तोलाले पत्रकारिता स्थापना गर्नुको कारणबारे प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले सारदा सुदशनबारे चर्चा गर्दै फाउन्डेशनले स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कारका लागि स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालसंग सहकार्य गरेको बताउनुभयो ।
Tags: Bhawani prasad khapungCorona Virus #Covid19Dr. Sudha DevkotaHealth journalistPabitra sunwar